मेरि बास्सै छोडेका बान्द्रेले महिनाको पाँच लाख कमाउछन् ।
काठमाडौ : हास्यकलाकार बान्द्रे(सुरज चापागाईं) अचेल मेरि बासैमा देखिदैनन् ।डेढ दशक अगाडि कलाकारिता सुरु गरेका उनी मेरि बासैबाट आम जनता समक्ष चिनिए ।
जुन टेलिफिलिमले उनलाई दर्शकमाझ चिनायो त्यहि टेलिफिल्ममा उनी नदेखिनुको कारण के हो त ? चार बर्ष पहिला उनै बान्द्रे बिवाह बन्धनमा बाधिए ।बैवाहिक जिवनमा जोडिएपछि भने उनी कलाकारितासगै अर्को पेशातिर एकदमै आकर्षित भए ।
कलाकारिता छोडेर कृषि पेशामा होमिएका बान्द्रेले महिनाको लगभक चारदेखि पाच लाख आम्दानि गरिरहेका छन् ।
आजको यश शृङ्खलामा तिनै बान्द्रे जो तपाईं हामी सबैको प्रिय पात्र हुन् जो निकै लामो समयपछि मिडियामा आइ आफ्नो सम्पूर्ण जानकारी सहित विशेष भिडियो पेश गर्दछौ ।
कृषिलाई आफ्नो कर्म ठानेर यसरी लागिपरेका बान्द्रे यानकि सुरज चापागाईलाई हाम्रो टिम सम्मान गर्दछ ।गरे के हुँदैन र ? भन्ने उखानलाई मेरी बास्सैका बान्द्रेले सत्य साबित गरिदिएका छन् ।
बान्द्रेलाई नचिन्ने सायदै नहोलान् । उनै चर्चीत हास्य कलाकार बान्द्रे यतिबेला बट्टै तथा टर्कीको व्यावसाय गरिरहेका छन् । बान्द्रेलेले यो व्यावसायमा करोडौंको लगानी गरेको बताएका छ्न । उनको फर्ममा अहिले १० हजार बट्टै रहेका छन् । एउटा बट्टै २ सयदेखि ३ सय ग्राम सम्मको हुन्छ ।
र उक्त बट्टै १ सय ३० रुपैयामा बिक्रि हुने गरेको छ। यो हिसाब अनुसार बान्द्रेको फर्ममा १३ लाख बराबरको त बट्टै मात्रै रहेका छ्न ।यति मात्रै नभई बान्द्रेको फर्ममा बट्टैको अण्डा पनि बिक्रि हुने गर्दछ ।
एउटा टर्की बेच्दा १२ देखि १४ हजारसम्म पर्ने रहेछ । सुरजको भनाई अनुसार उनको फर्ममा ६५ देखि ७० लाख बराबरको टर्की त मात्रै रहेछ । यसका साथै सुरज अर्थात बान्द्रेले केही कुखुराहरु समेत पालेका छन् ।पुर्ण रुपमा बट्टै
तथा टर्की व्यावसायी बनेका सुरजले(बान्द्रे) ती प्रजातिका
लागी व्यवस्थित खोरको व्यवस्था गरेर यतिबेला आफ्नै व्यावसायमा ब्यस्त देखिन्छन् । फर्म खोल्ने योजना कसरी दिमागमा आयो ? अहिले व्यावसाय कस्तो भईरहेको छ अब भावी योजनाहरु के रहेका छ्न भन्ने विषयमा सुरज यसो भन्छन ।
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार १८:४८ गते0Minutes 912 Views